Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka Safarka USA » Boqortooyada Boqortooyada Boqortooyada King Kong waa diyaar
Boqortooyada Boqortooyada Boqortooyada King Kong waa diyaar
Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada (ESB), Dhismaha ugu Caansan Dunida, ayaa maanta ku dhawaaqay inuu qaaday qawaaniinta COVID-19 ee martida khibradeeda kormeerka ee la jaanqaadaya tilmaamaha cusub ee gobolka iyo magaalada.
Dhismaha Boqortooyada wuxuu dhammeystirey US $ 165 milyan oo dib-u-habeyn ah kaas oo ku daray irrid gaar ah iyo u ololeyn loogu talagalay booqdayaasha Goobjoogayaasha ee ku yaal Waddada 34th.
Maaskarada ayaa hadda ikhtiyaar u ah booqdayaasha barnaamijka 'ESB'.
Soo bandhigyo badan oo is-dhexgal ah iyo walxo - oo ay ku jiraan astaamaha 86th Raadiyayaashii Goobta Kormeerayaasha - si buuxda ayaa dib loogu furay.
"Boqortooyada Boqortooyada waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso martida si ay u sahamiyaan khibradeeda kormeerka cusub ee dib loo soo koobay gebi ahaanba," ayuu yiri Jean-Yves Ghazi, Madaxweynaha Boqortooyada Dhismaha Boqortooyada. Rakibayaashayada taabashada, oo hadda la dhammaystiray Noofambar 2019, ayaa hadda si buuxda u shaqeeya markii ugu horraysay tan iyo markii la xidhay bishii Maarso 2020. Si aad si buuxda ugu bogaadiso Icon-ka Caalamiga ah ee Magaalada New York, waa inaad gudaha soo gasho oo aad booqato Kormeerayaasha, waana awoodnaa ha sugin inaan ku soo dhoweeyo. ”
Bishii Nofeembar 2019, Dhismaha Boqortooyada waxay dhameystirtay $ 165 milyan oo dayactir ah oo lagu daray irid u heellan iyo hool loogu talagalay booqdayaasha kormeerayaasha ee 34th Waddo; hal dersin immersive, taabto, iyo matxaf tayo-tayo leh oo dukumiinti ka dhigaya taariikhda dhismaha laga soo bilaabo dhismihiisa ilaa heerka uu hadda marayo sida astaanta dhaqanka pop; iyo hagaajinta tayada deegaanka ee gudaha (IEQ) oo ay hogaamiso warshaduhu oo ay kujiraan ionization laba-cirifoodka, miirayaasha MERV 13 iyo hawo kordhinta oo horseeday guusha ESB oo ah dhismihii ugu horreeyay ee Maraykanka ee hela WELL Qiimeynta-Caafimaadka.
Bandhigyada caanka ah ee waayo-aragnimada oo dhan waxaa ka mid ah "Kong," taas oo u keenta martida waji ka waji leh astaamaha caanka ah ee lagu soo bandhigay filimkii asalka ahaa ee 1933; "Dhismo," taas oo martida la dhigo bartamaha taallo naxaas nololeed u eg iyo fiidiyowyo ka shaqeeya birta iyo wastaadyo markay dhisayaan munaaradda caanka ah; “Goobta 1920-yadii,” taas oo u oggolaanaysa martida inay ka eegaan dhismeyaasha sahaminta si ay u arkaan jidadka Magaalada New York dhammaadka 1920-meeyadii; "Muuqaalka NYC," halkaasoo booqdayaashu ku arki karaan sagaal meelood meel caan ah oo ku yaal New York iyada oo loo marayo dhismayaasha muuqaalka caadiga ah ee dabaqa 80aad; iyo “Dhismaha ugu caansan adduunka,” kaas oo ku tusinaya Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada sida astaan ​​dhaqameed muuqaal ballaaran oo 72-shaashad ah, oo 180-degree ah oo ku wareegsan tiyaatarka dhawaqa ah. Xitaa daawadayaasha caanka ah ee adduunka ee dusha ka fiirinaya banaanka 86th Dabaqa ayaa la soo saaray si loo isticmaalo.
Si loo kordhiyo waaya-aragnimada, tirada dadka soo booqda Kormeerayaasha mar kasta way xaddidan yihiin. Boos celis ayaa lagula talinayaa booqdayaasha waxaana horay loogu sii sameyn karaa khadka tooska ah. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Khibradda Kormeerka Dhismaha Boqortooyada ee Boqortooyada iyo waxyaalaheeda cusub, fadlan booqo esbnyc.com.